Arsenal Oo Xiiseyneysa Ciyaaryahanka Sheffield United Sander Berge.
HomeHoryaalka IngiriiskaArsenal oo xiiseyneysa ciyaaryahanka Sheffield United Sander Berge.
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay miisaameyso saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexeee Sheffield United Sander Berge .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Norway ayaa kasbaday shaqooyin badan tan iyo markii uu yimid Bramall Lane, laakiin Berge ayaa tabar u lahan waayey inuu joojiyo hoos u dhaca naxdinta leh ee Sheffield United bilowgii ololaha 2020-21.
Iyada oo Blades ay sii galeyso kaalinta 20aad iyagoo aan wax guul ah ka gaarin Premier League ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, Berge ayaa lagu soo waramayaa inuu raadinayo ka dhaqaaqista kooxda si uu u hubiyo inuu weli ciyaarayo kubad heer sare ah xilli ciyaareedka soo socda.
Sida laga soo xigtay wargayska ka soo baxa dalka Norway ee VG , Arsenal ayaa jeclaatay Berge waxayna dooneysaa inay heshiis la gaarto 22 jirkaan, iyadoo Mikel Arteta uu raadinayo inuu xoojiyo xulkiisa khadka dhexe.
Arteta ayaa haatan heysta Granit Xhaka , Dani Ceballos , Thomas Partey iyo Mohamed Elneny si uu uga soo xusho qadka dhexe, in kastoo labada dambe ay hada dhaawac yihiin hadana mustaqbalka Ceballos ee 2021 wali lama hubo.
Berge wuxuu qandaraas kula jiraa Sheffield United ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2023-24, halkaasoo uu ku dhaliyay labo gool 25 kulan tan iyo markii uu yimid.